पोग्वा फेरि युभेन्टसमै आउने, रोनाल्डोसँग हुने भयो दोस्ती ! – Everest Dainik – News from Nepal
पोग्वा फेरि युभेन्टसमै आउने, रोनाल्डोसँग हुने भयो दोस्ती !
काठमाडौं, साउन । म्यानचेस्टर युनाइटेडका मिडफिल्डर पउल पोग्वा पूर्व क्लब युभेन्टसमा फर्कन लागेका छन् । स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टसमा अनुबन्धित भएपछि उनी पनि सोही क्लबमा फर्कन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
युनाइटेडमा प्रशिक्षक जोसे माउरिन्होसँगको खराब सम्बन्धका कारण उनले क्लब छोड्न चोहेको स्पेनिस पत्रिका मार्काले जनाएको छ । विश्व विजेता पोग्बा अहिले छुट्टीमा रहेका छन् । युनाइटेड छोड्ने विषयमा सोचिरहेका उनी पूर्वक्लब युभेन्टस जान सक्ने उक्त समचारमा उल्लेख छ । उनले आफ्ना एजेन्टलाई युभेन्टसमा अनुबन्धका विषयमा कुरा गर्न लगाएको बताइएको छ ।
पोग्बा युभेन्टस फर्कन चाहानुमा रोनाल्डोको प्रभाव भएको बताइन्छ । र, उनले रोनाल्डोसँगै एक पटक युभेन्टसबाट खेल्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनी २०१६ मा युभेन्टसबाट ११४ मिलियन यूरोमा युनाइटेड गएका थिए । केही समय अघि उनलाई बार्सिलोना अनुबन्ध गर्न चासो देखाएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । तर, बार्सिलोनको त्यो प्रयास सफल हुन नसकेको बताइन्छ ।
ट्याग्स: Crishtiano Ronaldo, paul pogba, Pogba And Ronaldo